Rosia: “Mpamaham-bolongana malaza” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2009 8:52 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, বাংলা, Français, English
Any amin'ny tontolon'ny endri-tsoratra Sirilika (grika sy rosiana) ao amin'ny LiveJournal dia ny isan'ny mpamaky – “namana” -misoratra ao amin'ny bolongana iray no iray amin'ny fepetra mamaritra ny laza (na “hery”) ananany. Ny mpamaham-bolongana manana “namana” arivo raha vitsy indrindra dia antsoina hoe tysyachniki (avy amin'ny voambolana rosiana hoe tysyacha, “arivo”), ary, miankina amin'ny kalitaon'ny votoatin'ny bolongana kosa indray dia mety ho mahafinaritra io ho an'ny sasany ary mety ho manalasala kosa ho an'ny hafa, satria maro ny fomba azo atao entina manabontsina ny isan'ny “namana”.
Samy manome filaharana bolongana araka ny lazany tsirairay avy ny LiveJournal.com sy ny Blogs.Yandex.ru ka ao anatin'ny fepetra fandaharana azy ny isan'ny rohy miampita mankany amin'ilay bolongana na ny fakana azy ho loharanom-baovao sy ny isan'ny hevitra mivoaka amina lahatsoratra ao amin'ilay bolongana na ny isan'ny “namana” tsotra izao. Samihafa ny vokatry ny filaharana rehefa avy eo : LJ drugoi, ohatra, no mitana ny lohalaharna eo amin'ny roa tonta, saingy raha manome isan'ny mpamandrika miisa 32 682 azy ny LiveJournal ascribes dia manome lisitra azy 31 834 kosa ny Yandex. Ny mpampiasa LJ e_grishkovets (mpanoratra Rosiana Evgeny Grishkovets) dia mahazo filaharana fahatelo ao amin'ny LiveJournal ranking, nefa kosa filaharana faha-12 ao amin'ny Yandex, raha jerenao ny isan'ny mpamaky; nefa, raha jerenao kosa indray ny filaharan'ny “heriny” dia any amin'ny laharana faha-106 no ahitana ny mpampiasa LJ e_grishkovets.
Eo ihany ny fahasarotana araka ny habetsahany, fa samy manana ny andraisany azy ho malaza ihany koa ny tsirairay, na any amin'ny famahanam-bolongana na amin'ny fiainana andavanandro tsotra. Eto ambany eto misy hatsikana (mety tsy mampihomehy antsika mihitsy) fohy (RUS) raha ny famaritana ny atao hoe mpamaham-bolongana “malaza” no resahina, navoakan'ny mpampiasa LJ burtin – izay manana namana miisa 815, saingy noho ny antony maro dia tsy voalahatra mihitsy ao amin'ny filaharana notantaraina etsy ambony:
- Mpamaham-bolongana malaza, hono, ianao? – hoy ny namako [mpampiasa ny LJ] dochka_rosy.
– Ye, izany mihitsy aho, – hoy aho namaly niraondraona hafaliana.
– Anontanio azy ary [mpamaky/”namana”] sao mba misy mivarotra[Beskid] ski ry zareo[”Fitaovana mavesatra fitondran'ny mpizahatany Rosiana an-tendrombohitra namboarina tany Mukacheve,” Okraina]?
Izay ihany no nahatongavako eto, hanontany izay.